Umnotho waseSpain uyaphola futhi uthinte imakethe yamasheya | Ezezimali Zomnotho
Umnotho waseSpain uyaphola futhi uthinte imakethe yamasheya
Imininingwane emisha ye-macro emnothweni waseSpain ikhombisa ukuthi ukuphola kwayo kuyinto yangempela. Kufika ezingeni lokuthi selivele lithinta izimakethe zokulingana zikazwelonke. Nge- ukwehla kwamanani lapho izinkampani ezibalwe khona zifakwe ohlwini. Ngoba inzuzo yakho kuma-akhawunti akho ebhizinisi kucatshangwa ukuthi iyehla ezindaweni zokuhlala. Ukuze ngale ndlela, kube yinkimbinkimbi ngokwengeziwe ukwenza inzuzo yokonga ingxenye enhle yabatshalizimali abancane nabaphakathi. Kuyisimo esivele sisethwe ezimakethe zezimali.
Olunye ulwazi oluhlaba umxhwele kakhulu lokwehla komnotho wezwe ukubuyekeza okuya phansi okuqhubekayo komkhiqizo womhlaba wonke (i-GDP). Futhi lokho kuba nempendulo yayo ngesikhathi esifanele ezimakethe zezimali. Ngokulungiswa okukhulu kwamanani afakwe ohlwini lwenkomba ekhethiwe yemakethe yamasheya aseSpain, i-Ibex 35. Ukuze izinga labo lokuncipha kwehle, okungenani esikhathini esifushane naphakathi. Uma i-Ibex 35 isondele kakhulu emazingeni azungeze amaphuzu angama-9.500 XNUMX, elinye lamazinga aphansi kakhulu emashumini eminyaka amuva nje. Ukuphelelwa yithemba kwengxenye enkulu yabatshalizimali.
Ngaphakathi kwalesi simo jikelele, akufanele sikhohlwe nokuthi izinyathelo azithathwa ukuvikela lesi simo ku-a ukwehla komnotho Ezweni lakithi. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, iSpain igcina imininingwane engcono kakhulu kunaleyo yamazwe angomakhelwane. Futhi lokhu kubonisa ukuphumula okuncane kubatshalizimali abancane nabaphakathi abakhethe imakethe yamasheya asekhaya. Kuyini okungokoqobo izimakethe zikazwelonke zezimali ezikhona njengamanje.
1 Umnotho waseSpain wehla
2 Kwehla ngokulingana ne-GDP
3 Amanani aphansi ayalimaza
4 Umongo ojwayelekile awunalo iqiniso
5 I-X-ray yomnotho waseSpain
Umnotho waseSpain wehla
Esinye sezici okufanele saziswe kakhulu emnothweni waseSpain ukuncika kakhulu emikhakheni ethile ekhiqizayo. Njengesibonelo, lokho kwezinkampani zokwakha kanye nezinsizakalo zabavakashi eziholele ekwenyukeni eminyakeni eyedlule. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, kuyadingeka futhi ukuhlola ukuthi umphumela we izitimela zaseJalimane kungalimaza umnotho waseSpain. Ikakhulu maqondana nokuthunyelwa kwabo ngaphandle futhi lokhu kungenza izindaba ezimbi kakhulu ezinkampanini ezibalwe emakethe eqhubekayo yaseSpain. Ngethuba langempela lokuthi ukuguqulwa kwamanani abo kuzoqhubekela phambili ezinyangeni ezizayo. Ukubuyela emuva okukhulu okukhombisa ukuthi kukhona okwenzekayo ngamaqembu ezezimali ezweni lethu. Ngaphandle kwezimpawu zokuqala zokwehla komnotho endaweni ye-euro.
Ngakolunye uhlangothi, kungahle kube yilokho kuphela amanani womkhakha kagesi noma yini esindiswa ekushisweni. Ngaleso sizathu esilula sokuchaza ukuthi bangawasebenzisa kanjani amanani esiphephelo kusukela manje kuqhubeke. Ukuheha ukugeleza kwemali ephuma ezihlokweni ezinkulu futhi kunenketho yokuthi amanani abo aqhubeke nokubuyekeza esikhathini esifushane. Ngaphandle kokubuyekezwa kwabo okuqinile ezinyangeni eziyishumi nambili ezedlule, lapho banconywe ngaphezu kuka-10%, ngaphandle kwesahlukaniso abasabalalisa abanikazi bamasheya abo. Ngenzalo emaphakathi ecishe ibe ngu-6%, ephakeme kunaleyo enikezwa yiyo yonke imikhiqizo yasebhange kanye nemikhiqizo etholakalayo yemakethe yemali engenayo engaguquki.
Kwehla ngokulingana ne-GDP
Uma uzotshala imali emakethe yamasheya ezinsukwini ezimbalwa ezizayo, ngeke ube nokhetho ngaphandle kokwazi ukuthi izimakethe zamasheya zingawela ngokulingana nokwehla koMkhiqizo Wekhaya Omkhulu. Lesi ngesinye sezihluthulelo zokubhekana nokutshalwa kwezimali kule nkathi yokwehla kwamandla omnotho eseduze nezwekazi elidala. Ukuthi ikwazi ukukhiqiza ukudonsa okusha futhi okukhathazayo kwe-bearish lapho kubiza khona ukuthi ululame esikhathini esifushane futhi mhlawumbe esiphakathi. Ngoba empeleni, umphumela ungalingana futhi kulokhu kube nokwehla kwama-stock indices emakethe yethu yamasheya.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele kugcizelelwe ukuthi imakethe yamasheya kazwelonke ingalandela umkhuba obekwe eminyakeni yowezi-2017 nowezi-2018 lapho i-Ibex 35 isale ngo-15%. Yimiphi iminyaka ebi kakhulu kusukela ngo-2010 nangemuva kweminyaka lapho kwafakwa khona inzuzo emisebenzini yabatshalizimali. Ngokwedatha evela kwaBolsas y Mercados Españoles (BME), imbalwa kakhulu imikhakha ehlala inethemba. Phakathi kwazo, ugesi negesi (8,9%), imboni yamakhemikhali (8,8%) noma amandla avuselelekayo (9,6%). Ngokuqondile labo abenza okusemandleni kulo nyaka futhi abagcina izinzuzo ziphikisana nomkhuba ojwayelekile.
Amanani aphansi ayalimaza
Intengo eshibhile yemali elinye lamaqiniso ahlawulisa amanani asekhaya. Ikakhulukazi kubamele umkhakha wamabhange abashona kakhulu ngaphandle kokukhetha noma yiluphi uhlobo. Njengendlela, kufanele ukubheke lokho BBVA Esikhathini esifushane kakhulu sesikhathi sisukile ekuhwebeni nge-6 kuye ngaphezulu kwe-4 euro ngesabelo. Ukubuyela emuva okukhulu okukhombisa ukuthi kukhona okwenzekayo ngamaqembu ezezimali ezweni lethu. Ngaphandle kwezimpawu zokuqala zokwehla komnotho endaweni ye-euro. Ngisho nengozi yokuthi isimo sizoba sibi kusukela manje.
Eminye imikhakha yebhizinisi ayivikeleki, ikakhulukazi leyo exhunywe kuyo imijikelezo yezomnotho esevele aqalile umqansa obheke phansi. Yize kungaziwa kuze kufinyelele kumaphi amazinga entengo yabo nokuthi ingabeka isisindo esihle semisebenzi ekhuthazwa ngabatshalizimali abancane nabaphakathi. Ngaphandle kokuthi kulezi zinyanga bahlehlise izikhundla zabo ezimakethe zezezimali ukuze bangashiyi ama-euro amaningi emgwaqweni ezinyangeni ezizayo noma eminyakeni. Ngamanye amagama, lesi simo siyinkimbinkimbi ngandlela thile kubathengisi abafuna ukubakhona ekushintshaneni.
Umongo ojwayelekile awunalo iqiniso
Esinye isici esisinda ezimakethe zezimali yizindaba ezenzeka endaweni yethu. Njengokungazinzi kwezepolitiki kwamanye amazwe aseYurophu, i I-Brexit noma impi yezohwebo phakathi kweChina ne-United States. Kuyizinhlamvu ezintsha zokuthi amasheya aqhubeke nokuwa, yize kukhona abanye abahlaziyi bezezimali abeseka ukuthi sekuyisikhathi esifanele sokungena ezimakethe zezimali futhi. Ngoba intengo yamasheya ishintshwe kakhulu ngakho-ke inamandla amakhulu okubuyekezwa esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside. Kepha imvelo ngokusobala imbi ngalolu hlobo lokuhamba ezimakethe zezezimali. Ngonyaka, njengo-2020, okuyinkimbinkimbi kakhulu.
Futhi ukugcizelela ukuthi kube neminyaka eminingi lapho izimakethe zamasheya zivala ukuzivocavoca kwazo kahle futhi bekuyisikhathi sokuthi thatha inzuzo okweqile. Ngakho-ke ukuthi isikhathi sesifikile salesi simo esisha nakho konke lokhu, ukuqapha kufanele kube yimbangela ejwayelekile ezenzweni zabatshalizimali abancane nabaphakathi. Ngaphandle kokuthi kungahle kube nemibuthano enamandla kusukela manje kuqhubeke. Kepha kufanele zisetshenziswe ngabatshalizimali, kunokuba bangene ezimakethe, ukulungisa izikhundla. Ukuze bavikele izikhundla zabo futhi babe nemali ethe xaxa yokusebenzisa amathuba ezamabhizinisi ngokungangabazeki azofika eminyakeni ezayo. Njengengxenye yecebo ongalisebenzisa ekuzivocavoca okulandelayo emakethe yamasheya.
I-X-ray yomnotho waseSpain
Umkhiqizo waseSpain Gross Domestic Product (GDP) ubhalisa ukukhula ngekota okungu-0,5 kwikota yokugcina ehlaziyiwe ngokwamanani, ngokusho kwedatha yakamuva enikezwe yiNational Institute of Statistics (INE). Lapho kutholakala khona ukuthi isilinganiso singaphansi kokuyishumi okubili kunalokho okubhaliswe kwikota edlule. Ngakolunye uhlangothi, ukukhula konyaka nonyaka kweGDP imi kuma-2,3%, uma kuqhathaniswa no-2,4% kwikota edlule. Umnikelo wesidingo sikazwelonke ekukhuleni kwaminyaka yonke kwe-GDP ungamaphuzu ayi-1,6, okuyisithupha kokuyishumi kokuncane kunalokho konyaka owedlule.
Ngokwengxenye yayo, ukufunwa kwangaphandle kuveza umnikelo wamaphuzu we-0,7, okuyishumi okuhlanu okuphezulu kunalelo lekota eyedlule. Lapho i-deflator ephelele ye-GDP inyuka ngo-1,0% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo sonyaka odlule, ingxenye eyodwa kokuyishumi ngaphezu kwekota edlule. Mayelana nokuqashwa emnothweni, ngokwemisebenzi efana nayo ngokugcwele, ibhalise ukushintshashintsha kwekota-ngekota okungu-0,4%, okuyizilinganiso ezintathu kwezishumi kokungaphansi kwaleyo ebhaliswe esikhathini sangaphambilini sokuhlaziywa.
Futhi ngokuya kwesikhathi, ukuqashwa kukhuphuke ngezinga elingu-2,5%, izinga eliphansi ngezintathu kweshumi, okusho ukwanda kwemisebenzi elinganayo eyisikhathi esigcwele engama-459 ngonyaka owodwa. Ukuqinisekisa ukuthi ukwehluka kwaminyaka yonke kwezindleko zabasebenzi kulekota kumi kuma-2,1%. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, umnikelo wesidingo sikazwelonke ekukhuleni kwe-GDP unyaka nonyaka ungamaphoyinti ayi-1,6, okuyisithupha kokuyishumi okuphansi. Ngokwengxenye yayo, ukufunwa kwangaphandle kuveza umnikelo wamaphuzu ayi-0,7, okuyishumi kweshumi ngaphezulu kunangesikhathi sokugcina esihlaziyiwe embikweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Umnotho waseSpain uyaphola futhi uthinte imakethe yamasheya
Ungayakha kanjani i-Permanent Portfolio yemali ejwayelekile
Ama-Oscillator wokuhweba emakethe yamasheya